I-10 ekhawulezayo kwiBachelor Degree
Julayi 17, 2020 Eze uThadayo
I-10 ekhawulezayo yeeDigri ze-Bachelor ezikwi-Intanethi
Apha uya kufumana inani leenkqubo ezikhawulezayo zesidanga se-bachelor ongasithatha kwaye ufumane isidanga ngexesha elifutshane kakhulu mhlawumbi le-2yrs, unyaka, okanye nangaphantsi.
Ke, phumla kwaye ufunde kakuhle ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi isidanga sebhatshela ukuya njengoko eli nqaku ngokuqinisekileyo liya kukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo ekufumaneni isidanga esikhawulezayo kwi-intanethi.
Ukukunceda ngcono sibhale amanqaku aliqela izifundo zekhompyutha ungathatha simahla nakwabo bafuna isidanga, sikwapapashe uphando kwi kwizifundo ezilishumi eziphezulu zokugqibela kwizifundo zaseCanada banokuthatha ithuba.
Ngaba ujonga iikholeji ezinamaxabiso aphantsi ngaphandle kweefizi zesicelo? Cofa apha
Nali inqaku elihlanganiswe kakuhle Izifundo zasimahla ze-10 zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada
Isidanga esikhawulezayo kwi-Intanethi
Uncedo lokufumana isidanga kwi-Intanethi
Iinkqubo ezili-10 ezikhawulezayo zesidanga se-Intanethi
Ungasifaka kanjani isicelo seNkqubo yokuKhawulezisa isiDanga se-Intanethi
Ezinye iiyunivesithi ezifumanekayo zemigangatho ekhawulezileyo
Isiphelo kwiiNkqubo ezili-10 ezikhawulezayo zeDigital Degree
Enkosi ngokuveliswa kwe-intanethi inkqubela phambili sele yenziwe kuwo onke amacandelo / umbutho omkhulu kwihlabathi kwaye icandelo lezemfundo alishiywanga kule nkqubela phambili. I-intanethi iyenzile yonke into yalula kwaye inguquko eza nayo iyamangalisa kwaye ikhululekile xa kuthelekiswa namaxesha amandulo.
Kukho iintsuku apho kuphela ngamaziko omzimba apho abantu banokufumana idigri, i-intanethi yenze kube lula kubantu abangenayo, mhlawumbi, abaxhamla okanye abanesifo esithile sokukhubazeka ukuba bahambe kwi-intanethi baze bafumane i-degree ye-bachelor degree.
Sonke siyazi ukuba kukho iindidi ezahlukeneyo zeedigri kodwa kule meko, iya kuba sisidanga sokuqala.
Isidanga sebhatshela luhlobo lwesidanga sokuqala esinikwa umfundi yikholeji yakhe okanye iyunivesithi ukugqiba ikhosi yokufunda, exhomekeke kwiyunivesithi okanye ikholeji kunye noqeqesho lwezifundo, inokuhlala iminyaka emithathu okanye nangaphezulu.
Ngoku ukuyizisa kwinqanaba le-intanethi, i-degree ye-bachelor degree ye-intanethi yinqanaba elinikezelwa kumfundi ogqiba ikhosi yabo yokufunda kwi-intanethi kunye nexesha lokufumana le nqanaba lixhomekeke kwingqeqesho yezemfundo ethathwe ngumfundi.
Nangona kunjalo, andivakalelwa kukuba ukufumana isidanga se-bachelor esezantsi kunale siyifumene ngaphandle kweintanethi (ngokwasemzimbeni) ndiyakuqinisekisa ukuba bayafana kwaye banokusetyenziswa kwimeko enye.
Ukufumana isidanga sebhatshela ngaphandle kweintanethi kuxinzelelo, uya kuya kwiiklasi mihla le ngokungafaniyo ne-Intanethi apho yonke into oyifunayo yikhompyuter kunye nonxibelelwano lwe-intanethi.
Ukufumana isidanga se-bachelor ngaphandle kweintanethi indawo echongiweyo iyafuneka yiyo loo nto "iziko" lokwakha, umfundi okwi-Intanethi angafumana izifundo naphi na apho bonwabile.
Ukufumana i-bachelor ye-intanethi akubizi, oku kuthelekiswa nento enokukuthatha ukuba ufumane isidanga esifanayo ngendlela eqhelekileyo.
Kuba sele uziqhelile ukuba yintoni isidanga se-bachelor esikwi-intanethi kunye nezibonelelo zayo ngoku ndiza kungena kwisihloko esiphambili.
Ngokungafaniyo nendlela yesiqhelo yokufumana isidanga se-bachelor esithatha ukuya kwiminyaka emi-3 okanye nangaphezulu, ukufumana isidanga esikhawulezayo kwi-bachelor's degree kuthatha isiqingatha sexesha.
Impilo kunye noNesi
Izifundo zoNonophelo lwaBantwana
Izifundo zeTekhnoloji yeKhompyuter
Le khosi idweliswe apha ngasentla inokuthathwa nangubani na, oko kukuthi, abantu esele bekhona emsebenzini okanye malunga nokungena kubasebenzi njengoko kungalola izakhono ezihlanganisiweyo zabo sele besebenza kwaye kubanike amathuba angcono okufumana unyuselo.
Kulabo bafuna ukungena kubasebenzi, kuya kubenza bafune izikhundla ezingcono neziphezulu.
Njengokuba kukho iinkqubo zokufaka isicelo kwiyunivesithi esemhlabeni okanye ekholejini, kukwakho neenkqubo ezichaphazelekayo ekufakeni isicelo senkqubo ekhawulezileyo ye-bachelor degree kwaye ezi nkqubo zezi;
Inyathelo lokuqala nelona libalulekileyo kukufaka isicelo.
Ngamaxwebhu akho esicelo, uya kungenisa iingxelo zebakala lakho, izincoko kunye namanye amaxwebhu axhasayo okanye aceliweyo.
Izinto zobuqu ezinje ngedilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni kunye nezinye iinkcukacha zonxibelelwano.
Idiploma yamabanga aphakamileyo okanye ubungqina bokuthweswa isidanga kuya kufuneka.
I-GPA yezifundo kunye nokubhalwa kwesikolo esiphakamileyo
Amanqaku e-SAT okanye e-ACT anokufuneka
Iingcebiso ezivela kumcebisi okanye kutitshala.
Nangona kunjalo, zininzi kwaye iiyunivesithi ezininzi ezikwi-Intanethi ezahlukileyo yiyo loo nto iimfuno zabo zahlukile kwaye ayizizo zonke ezinokufuna yonke inkqubo okanye izinto endizidwelise apha ngasentla ngelixa ezinye zinokufuna konke oko kunye nokunye okuninzi, zive ukhululekile Funda nzulu
College of Albertus Magnus
Iinkqubo zekholeji ezikwi-Intanethi kunye neFlex zintsha, iikhosi ezikhawulezayo ziyilelwe abantu abadala abasebenzayo abafuna ukuqhubela phambili nezakhono zabo okanye ukufumana ubuchule obutsha. Abafundi banokufumana iikhredithi ezingama-30 kungaphelanga unyaka ngokuthatha iikhosi ezintathu ukuya kuthi ga kwiiveki ezintandathu okanye ezisibhozo. Ukukhutshelwa kwetyala ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-90 zetyala zivunyelwe ngokunjalo.
Ukufunda kwabo okukhawulezayo kwi-Intanethi kugxile kwishishini, kwitekhnoloji, ukhathalelo lwempilo, kunye nemfundo ekhethekileyo kwiShishini lezoLimo, ubuNkokheli obuSebenzisiweyo, uPhuhliso lwaBantwana, uLwaphulo-mthetho kwezobuLungisa, i-Industrial / Organisation Psychology, Izifundo eziHlangeneyo, ubuDlelwane boluntu, kunye neTekhnoloji yabasebenzi.
Ikholeji yase-Becker ibonelela ngeedigri ezikwi-Intanethi ezinokugqitywa kwiiveki ezintlanu, ezisixhenxe okanye ezili-15. Ukufumana isidanga sakho ngokukhawuleza, unokukhetha ukubhalisa kwiqela lasehlotyeni okanye ukungena ebusika. Inkqubo ikwaqhuba inkqubo yokuhambisa ngetyala ngesisa kwaye yamkela ukuya kuthi ga kwiikhredithi ezingama-90.
Njengoko benditshilo ngaphambili, inkqubo yokwenza isicelo kwi-Intanethi kwisidanga esikhawulezayo se-bachelor iphantse yafana nokufaka isicelo kwiyunivesithi eqhelekileyo umahluko kuphela kukuba kwenzeka kwi-Intanethi kwaye ngaphandle kweyunivesithi, ufaka isicelo kwi-intanethi ukuba ube necandelo kwiwebhusayithi yabo ukukhokela abafundi kuyo yonke le nkqubo.
Ezi nkqubo ze-10 ezikhawulezayo ezikwi-intanethi ezikhawulezayo kwi-2020 zinokugqitywa kunyaka omnye okanye ngaphantsi, ngokungafaniyo neendlela zesiko ezinokuthatha iminyaka emine okanye nangaphezulu.
Ngoku, olona loncedo lukhulu lokuthatha ezi khosi kwi-Intanethi kukuba ziyakhawuleza, enyanisweni, zezona zifundo zikhawulezayo zokuthatha isiqinisekiso se-intanethi kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ubukhulu becala kuxhomekeke ekubeni uzithatha kangakanani.
Isidanga sokuqalaisidanga esikhawulezileyongokukhawuleza kwi-intanethiisidanga esikhawulezileyo esikwi-intanethii-bachelor degreeizifundo zekhompyuthakwi-degree degree
Post Previous:Ukucwangcisela ukulandela i-Master's kuYilo? Nantsi into ekufuneka uyazi
Okulandelayo Post:Imfundo kunye neMidlalo: Into ekufuneka uyazi
Pingback: Eyona 3 Iinkqubo eziKhawulezayo zabongikazi eTexas